Epistily faharoa nosoratan'i Joany - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Epistily faharoan'i Joany)
Ny Epistily faharoa nosoratan'i Jaona na Epistola faharoa nosoratan'i Joany na Taratasy faharoa nosoratan'i Joany dia boky ao amin'ny Baiboly ao amin'ny Testamenta Vaovao izay isan'ireo atao hoe epistily. Atao hoe Epistily katolika io epistily io noho izy tsy natokana ho ana fiangonana iray fa ho an'ny fiangonana sy ny olona rehetra. Ny Epistily faharoan'i Joany dia soratra fohy indrindra ao amin'ny Baiboly kristiana, tsy misy afa-tsy andininy 13 ny ao amin'io epistily io. Tokony ho teo anelanelan'ny taona 90 sy 110 no nanoratana azy.
Δεύτερη Επιστολή Ιωάννη / Deuterê Epistolê Iôannê no anaran'io epistily io amin'ny teny grika fa Epistula II Ioannis kosa amin'ny teny latina.
Ny lovantsofin'ny Fiangonana dia manao ny epistily telo mitondra ny anaran'i Joany (na Jaona) ho nosoratan'i Joany Evanjelista. Ankehitriny anefa dia maro ny ady hevitra ny amin'ny fahamarinan'izany lovantsofina izany. Misy anefa ny manampahaizana izay milaza fa ny Epistily faharoan'i Joany dia soratr'olona hafa izay mety ho ilay "Loholona" na "Antidahy", atao hoe Joany koa, resahina ao amin'ny Epistily faharoa (2Joa. 1.1) sy ao amin'ny Epistily fahatelo (3Joa. 1.1). Ny ankamaroan'ny mpikaroka dia mihevitra fa ilay Joany Antidahy no nanoratra ny epistily telo amin'ny anaran'i Joany.
Ny anoratana[hanova | hanova ny fango]
Nosoratana ho an' "Itompokovavy voafidy sy ny zanany" (na ho an'ny "Andriambavy voafidy sy ny zanany") izany epistily izany (2Joa. 1.1). Ny manampahaizana dia miray hevitra fa tsy vehivavy izany fa fiangonana iray, ka mety iray amin'ireo fiangonana tany Azia Minora izany.
Ny mpanoratra dia mamerina ny hevi-dehibe voalaza ao amin'ny Epistily voalohan'i Joany, dia ny didim-pitiavana, ny firaisana amin'Andriamanitra, nefa ambarany amin'ny fomba fohifohy kokoa izany (2Joa. 1.4-9), sy ampiany fampianarana ny hoe: "Raha misy olona mankeo aminareo ka tsy mitondra izao fampianarana izao, aza mampiantrano azy na miarahaba azy akory". Izany olona izany dia ilay "mpamitaka sy antikristy" (2Joa. 1.7), ka izay olona mampandroso azy an-trano dia "miombona amin'ny ratsy ataony" (2Joa. 1.11).
↑ Voambolana: "itompokovavy" ny ao amin'ny Baiboly protestanta amin'ny teny malagasy.
↑ Voambolana: "Andriambavy" ny ao amin'ny Baiboly katolika amin'ny teny malagasy.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Epistily_faharoa_nosoratan%27i_Joany&oldid=978713"
Voaova farany tamin'ny 27 Desambra 2019 amin'ny 04:06 ity pejy ity.